အဆုံးဆိုတာ တနေ့သောအခါ အစ ပါပဲ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အဆုံးဆိုတာ တနေ့သောအခါ အစ ပါပဲ
Posted by မောင်ရိုး on Apr 24, 2014 in Creative Writing | 36 comments
ကဗျာပြခန်း မယုံရင် ပုံပြင် မှတ်
အစ ရှိလျှင် အဆုံးရှိပေလိမ့်မည် ။
သို့သော် .. အဆုံးဟူသည်ကား တနေ့သောအခါတွင် အစ မဖြစ်နိုင်ပေဘူးလား ,?
ဤသို့ တွေးမိပြန်သောအခါ အဆုံးဟူသည် အစတစ်ခု ဖြစ်ရန်
အထောက်အပံ့ပြုမည်ဟု ……ဖြေသာသည့်အတွေးဖြင့်သာ ……
ဟော ……… အခု ဆရာဦးဝင်းတင်ကြီး နောက်ဆုံးခရီးအဖြစ်
ထွက်ခွါသွားခဲ့လေပြီ ။ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် စိတ်မကောင်းသော်လည်း နောက်ထပ် မွေးဖွါးလာမည့်
ဆရာဦးဝင်းတင်လေးများ၏ အစ များဖြစ်လေမလားဟု မျှော်လင့်မိပါသေးသည် ။
ယနေ့ …… ထရေးဒါးဟိုတယ်ရှေ့ရောက်သောအခါတွင် အဆုံး အစ တစ်ခုကိုထပ်မံတွေ့ရပြန်သေးသည် ။
ထရေးဒါးဟိုတယ်ကြီးကား အဆုံးသတ်သွားပြန်ပြီထင့် ။
ထရေးဒါး ဆိုသောစာလုံးအစား ရှန်ဂရီလာ ဟူသောစာလုံးကြီးမှာခန့်ခန့်ထည်ထည်……
နေရစ်တော့ ထရေးဒါးရေ ……
ရှန်ဂရီလာ ကိုစတင်အသက်သွင်းကြမယ်ထင်၏ ။
ထရေးဒါး၏အဆုံးသည် ရှန်ဂရီလာ ၏ အစ …………
ရုတ်တရက် ကဗျာချစ်သူလူငယ်လေးတစ်ယောက်ထံမှ တယ်လီဖုန်းဆက်လာသည် ။
မက်ဆေ့ပို့ထားပါသည် … ဖတ်ကြည့်ပြီး ပ်ု့စ်တစ်စောင်တင်ပေးပါ တဲ့ ………
” ဦးဆာရေ … ကျနော်တို့ ကဗျာပြခန်းလေး နားတော့မယ် ။ အဲဒါလေးကို ရွာထဲတရားဝင်အသိပေးချင်လို့ ပို့စ်တင်ပေးနိုင်မလား ။ ကဗျာပြခန်းလေးကို ကာလတစ်ခုအထိအကန့်အသတ်မရှိနားဖို့ ပြောရမှာ ရင်ထဲနင့်နေလို့ … ” တဲ့
ဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ ကဗျာချစ်သူ လူငယ်များ၏ ရင်သွေးရတနာ ပြခန်းလေးကို သူတို့ ချစ်ရှာမည်ပေါ့။
သူတို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါလိမ့်မည် ။
သူတို့ခံစားမှုကိုနားလည်ပေးရင်း သားသတ်သမားအဖြစ် ကျနော် လက်ခံလိုက်ပါသည် ။
ကဗျာချစ်သူတို့၏ရင်သွေး ၊ သူတို့၏ သမိုင်းမှတ်တိုင် ၊
သူတို့ချစ်သော ကဗျာပန်းခင်း … ……
ဒါတွေအားလုံးကို ကျနော် အဆုံးသတ်ပေးရပါတော့မည် ။
ကျနော်ကရော မခံစားတတ်ပေဘူးလား ?
သားသတ်သမားသည် အကြင်နာကင်းမဲ့ရပေလိမ့်မည် ။
ဒါးချက်တိကျဖို့အတွက် လက်ကိုဖြေးညှင်းစွာမြှောက်လိုက်သည် ။
ကဲ .…… သွားပေတော့ !!!
” သဂျီးခိုင်နှင့် ရွာသူရွာသားများခင်ဗျာ …… ယခုမှစ၍ ကဗျာပြခန်းကို ကာလအကန့်အသတ်မရှိ
ရပ်နားထားလိုက်ပြီဖြစ်ပါကြောင်း ဝမ်းနည်းစွာ အသိပေးအပ်ပါတယ် ခင်ဗျား ”
သားသတ်သမားသည် သူ့တာဝန်သူထမ်းဆောင်သွားလေပြီ ။ ။
အောက်တွင်ဖေါ်ပြအပ်သော ကျေးဇူးတင်လွှာသည် ကဗျာချစ်သူများမှပို့ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည် ။
သူကြီးဦးခိုင်နှင့်တကွ လေးစားရပါသောရွာသူရွာသားများခင်ဗျာ ……
ကျနော်များ ကဗျာချစ်သူများ၏ ပြခန်းလေးဖြစ်မြောက်ရေးအတွက် အဖက်ဖက်က ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးကူညီခဲ့ပါသော
ရင်တွင်းဖြစ်ကဗျာများပေးပို့ကူညီခဲ့လေသော ကဗျာဝါသနာရှင် ဆရာ ဆရာမများ
ဖတ်ရှုဝေဖန် အကြံပေးကြသော ရွာသူားများ
စသည့် အားလုံးသော လူကြီးမင်းများအား ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါကြောင်း
လေးစားစွာဖြင့် ဂါရဝပြုရင်း နှုတ်ဆက်ပါရစေ ခင်ဗျာ ”
အလင်းဆက် ၊ ဦးမာဃ၊ မဟာမြန်မာ ၊
ကမ်းဝေး ၊ ကေဇီ၊ မွန်မွန်၊ နေခြည်၊ သူကလေး
တခါတရံတွင် အစဟူသည် အဆုံး၏နောက်ထပ်စာမျက်နှာတစ်ခု
အဆုံးဆိုတာ တနေ့သောအခါ ……အစ ပါပဲ လို့ ………။
ကျနော်တို့ကို နားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်လိမ့်မယ် ထင်ပါကြောင်း။
အဲဒါကပဲ ကျနော်တို့ရဲ့ ဖြေသိမ့်စရာပါ။
တဂျားနဲ့ ငါ ရန်ဖြစ်ဖို့ တစ်ကြောင်းလျော့သွားတာ အမြတ်ပေါ့။
နောက်ထပ် ဘယ်နှကြောင်း ပိုတိုးလာမယ် မသိသေးဘူး
နောက် အကြောင်းတွေတော့ သများ မပါဝူးးးးး
ကိုယ့် ပေါက်ကရ ပို့(စ) ရေးချင်တာ တွေ အကုန်ရေးဖို့ကို အချိန်မလောက်လို့။
ကြားရတာ စိတ်မကောင်းလိုက်တာ။ ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟင်။ ကဗျာမရလို့လား။ ဘာဖြစ်တာလဲဟင်။
ရိုးသွားလို့များလားမသိ ကဗျာပြခန်းအတွက် ကဗျာပေးပို့ခြင်း အရှင်းမရှိတာ
သုံး လ လောက် ရှိပြီ ထင်ပါရဲ့။
ကဗျာဆိုတာလည်း လိုသလောက် ထုတ်လုပ်ပေးလို့ရတဲ့ စက်ရုံထုတ်ပစ္စည်းမှ မဟုတ်တာလေ ။
ဒီတော့ ရှားပါးသယံဇာတကို တူးဖော်မရသေးလို့ ခဏနားတဲ့သဘောပါ။
ဘယ်အချိန်ထိ နားထားမယ်ဆိုတာသာ မပြောနိုင်သေးတာပါ။
ကျနော်တို့မှာ ပြင်ဆင်စရာတွေ စီစဉ်စရာတွေ များလှပါတယ်။
တစ်ခုချင်း ပြောပြနေရင် ဘေးလူတွေပါမောနေမယ်။
ဒီတော့ လောလောဆယ် နားထားလိုက်တယ်ပေါ့။
ပြခန်း (၁) ကနေ (၁၂) အထိ အမှတ်တရဆုလက်ဆောင်တွေ ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ။
အခု လာမယ့် တွေ့ဆုံပွဲမှာ လက်ကျန်ပြခန်းတွေဖြစ်တဲ့ ပြခန်း (၁၃) ကနေ (၁၆) ထဲက ဆုရကဗျာနှစ်ပုဒ်ကို ထပ်ပေးပါမယ်။
(ပြခန်း ၁၃ နဲ့ ၁၆ မှာက ဆုရကဗျာရွေးချယ်မှု
ကျန်တာကတော့. . . .
တောတွင်းပျော် ရဲ့ ညီမငယ်လေးသို့ ကဗျာရယ်
မခိုင်ဇာ ရဲ့ မြတ်နိုးခြင်း ကဗျာတို့ဖြစ်ပါတယ် ။
လာမယ့် တွေ့ ဆုံပွဲမှာ ကဗျာရှင်တွေအတွက် အမှတ်တရ ပေးအပ်ပါမယ် ။
အခု ကဗျာပြခန်း မရှိတော့တာပါ။
ကဗျာချစ်သူလူငယ်အဖွဲ့ က ရှိပါတယ်။
ကဗျာချစ်သူတွေ သွေးမကွဲပဲ ကဗျာကိုချစ်မြဲ ချစ်ဆဲ
သ်ု့လော သို့လော ဖြစ်မယ့်သူတွေအတွက် ကြိုပြောရတာပါ။
ကဗျာချစ်သူလူငယ်များ ဒီရွာ ဒီကဗျာတွေကြားမှာ
ဆက်လက် ချစ်နေဦးမှာ အသေအချာပါပဲ။
ငါတို့ ဒီရွာမှာ ဒီလို ကဗျာပြခန်း ဆိုပြီး
အောင်မြင်စွာ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ် ဆိုတာလေးနဲ့
24 /4/ 2014 /
ကဗျာပြခန်းမှာ ကို့်အရင်းနှီးဆုံးမောင်နှမတွေချည့်ဖြစ်နေပေမယ့် ကိုယ်ဝါသနာအပါဆုံးဝတ္ထုတိုဘက်တောင်မလှည့်နိုင်လို့ သိပ်အားမသန်တဲ့ကဗျာ(ဘယ်လောက်အားမသန်လဲ တဂျားအသိဆုံး)ကို တစ်ပုဒ်လောက်တော့ရေးပို့မယ် ပို့မယ်နဲ့ ပြခန်းပိတ်သွားတဲ့အထိမပို့နိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ကြပါ။
ကဗျာပြခန်း ကို ရပ်နားလိုက် ဖို့ အစီအစဉ်ရှိတာလား
အားလုံး ဆုံးဖြတ်ချက်အရ ရပ်နားလိုက်တာပါ။
ကဗျာ ခန်း နားပီလား …
အင်းလေ…နစ်ကိုးရဲ့ အဆုံးဟာ ချက်ထွီရမ် ရဲ့ အစ ဆိုလား …
ကဗျာ ရေးချင်စိတ်တွေ ကုန်ဆုံးသွားခြင်းရဲ့ အဆုံးမှာ …
ကဗျာ ရေးချင်စိတ်တွေက ပြန်လည် ထကြွလာပြန်တယ် …..
ကဗျာပြခန်းက နားသွားဘီဆိုဒေါ့ကာ အဲ့ဒီ ပြန်လည် ထကြွလာတဲ့အစကို …
ပို့စ်ရေးတဲ့ လူကြီးလို အကြင်နာ ကင်းမဲ့စွာ အဆုံးသတ်ပလိုက်ဒယ် …
အတည် ပြောရရင် …
ကဗျာပြခန်းဆိုတာ ခရီးရှည် ထွက်သွားတဲ့လူလိုပဲ ဖြစ်မှာပါ …
ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါ ဝမ်းသာအယ်လဲ ကြိုဆိုဦးမှာပါ ….
ဥဆာ ရေးထားတာလည်း ခိုက်သဗျာ …
ကလေးတွေ အားကြိုးမာန်တက်လုပ်တာကို မှန်မှန် အားမပေးမိဘူးကို။
ငါမ၀င်လည်း ၀င်မယ့်သူရှိပါတယ်။ငါမဗုတ်လည်း ဗုတ်မယ့်သူရှိပါတယ် ဆင်ခြေတွေကွကိုယ်ပေးလို့။
ဂဇက်စာပေဆုတောင် မနည်း အသက်ဆက်ထားရတာ။
ဥက္ကဋ္ဌကြီး ဦးမိုက် မားမားမတ်မတ်ရပ်ပေလို့ပေါ့။
ကဗျာပြခန်းလေး ခဏနားတုံး ဓာတ်ပုံပြခန်းလေး လုပ်ကြပါလား။
ပန်းပြပွဲဆို ကိုယ်တိုင်ရိုက်တဲ့ပန်းပုံတွေ ပို့ကြမယ်လေ။
ကားပြပွဲဆို ကိုယ်တိုင်ရိုက်တဲ့ကားပုံတွေ ပို့ကြမယ်။
တစ်ခုခုတော့ ထပ် လုပ်ဖြစ်ဦးမှာပါ တီတီ
ချုပ်သိမ်းသွားတယ်လို့လည်း မထင်။ ရပ်နားတယ်လို့လည်း မမြင်။ လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု အချိန်ကာလတစ်ခုထိ အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးတယ်လို့ပဲ မြင်ပါသည်။ ၀မ်းနည်းစရာလို့ မယူဆဘဲ အလုပ်တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာ နိဂုံးသတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့သာ မြင်ပါသည်။ ဂုဏ်ယူပါသည် ကဗျာချစ်သူများအဖွဲ့။
အတိုင်းအတာတစ်ခုထိ အောင်မြင်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်
သဲ ချစ်ကိုမောင် says:
comment deleted by owner request
ကိုယ်ရေးထားတာ ကိုယ်ဖျက်လို့မရဖြစ်နေလို့ ဖျက်ပေးနိုင်သူများ ဖျက်ပေးကြပါ၊ ကူညီနိုင်လျင် ကူညီကြပါဦးလို့၊ ရေးလိုက်ပြီးကာမှ ရေးထားတာ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မကြိုက်တာကြောင့်ပါ
သဂျီး သို့မဟုတ် မော့ တစ်ယောက်ယောက်ကူမှရပါမယ်
အဲ့ဒါဆိုလဲ မော်ဒရေတာများ လုပ်ကြပါဦး၊ ကူကြပါဦးလို့၊ ဖျက်ပေးကြပါဦး။
တော်လိုက်ဲ့ ဦးဆာလို့ ချီးကျူးပါရစေခင်ဗျာ
ခုတော့ …ခေတ္တရပ်ဆိုင်း…ဟတ်ဖ်တိုင်းပေါ့ :hint:
ပုံစံပြောင်းပြီး ဆက်တော့ လျှောက်နေကြဦးမှာပါ
စိတ် တော့ မ ကောင်း ဘူး။
ပြီး ခဲ့ တဲ့ လ က ကဗျာ မ ရှိ ဘူး လို့ဆို တာ နဲ့ ပြခန်း ရပ် မ သွား အောင်
ကျ နော် ရေး သမျှ ထဲ က နေ ထု တ်ပြီး တစ် ကိုယ် တော် ပြ ခန်း ဖြစ် အောင် လုပ် ပေး လိုက် တယ်။
အခု တော့ ကျ နော် ပြ ခန်း က နောက် ဆုံး လို ဖြစ် သွား တယ် ပေါ့။
ဘော လုံး ပွဲ များ လို ပ ထ မ ပိုင်း 45 မိ နစ် နား တာ ဖြစ်ပါ စေ။
ကျနော် ရဲ့ 9500မြောက် ကော် မင်း က ထူး ထူး ခြား ခြား လေး ဖြ စ် သွား သည် ပေါ့။
ကျနော်လည်း ၇၅ ပုဒ်မြောက်စိန်ရတုအဖြစ် သားသတ်သမားဖြစ်သွားပါကြောင်း
အစီအစဉ်ကြေညာသူ ပဲ ထားပါ ခညာ
လူငယ်တွေစုစည်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်စွာ အောင်မြင်စွာ စွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ကြတာမို့ ချီးကျူးပါတယ်။
စုစည်းတဲ့လူငယ်တွေ အဖွဲ့လေးတစ်ခု ထူထောင်နိုင်လိုက်တာ အမြတ်ပေ့ါ။
လူငယ်တွေမို့ လူငယ်အလျောက် လိုတာတွေ အများကြီး ရှိခဲ့မှာပေမယ့်
အခုအထိ ပြောမနာ ဆိုမနာတွေအဖြစ် တလုံးလုံး ဖြစ်သွားတာ အမြတ်ပဲ လို့ ပြောရမလား :mrgeenn:
အပိုင်းဆက်ကဗျာက ၂ လ အလိုမှာ ကဗျာပြခန်းရပ်ခဲ့လို့ မတင်ပေးဖြစ်တဲ့ ထိုအပိုင်းများကို ပြန်လည်စုစည်း တင်လိုက်ပါမယ့် အကယ်လို့ အပိုင်းဆက်ကဗျာလေးကို ဆက်တိုက်ဖတ်ခဲ့တဲ့ စာဖတ်ပရိတ်သတ် တစ်ယောက်တလေများရှိခဲ့ရင် ထို စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကို ခင်ခ အလေးထားတဲ့အနေနဲ့ပါ။ ကဗျာအဖွဲ့ အနေနဲ့တော့ ကျုပ်ပြန်လည်ဖော်ပြမှာကို နားလည်ပေးပါဟု……..
တကယ်လို့ ကျနော်တို့ ပြခန်းမှာ ပြခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေ လိုမယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော့်ဆီမှာ ရှိပါတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်း…
ဒု တိယ ပိုင်း ပြန် ကန် ကြ ရ အောင် ဗျာ
ကဗျာဆိုတာမျိုးက ကျနော့်အမြင်ပြောရရင်စိတ်ဝင်စားသူ အကန့်အသတ်ရှိပြီး ရင်ထဲကခံစားချက်ရှိမှ ထိထိမိမိ လှလှပပရေးနိုင်တဲ့စာမျိုးပါ။ ကဗျာဆရာတွေက တစ်လတစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ် ပုံမှန်ရေးဖို့ဆိုတာ ရေရှည်မှာတော့ အခက်အခဲရှိကောင်းရှိမှာပါ။
ဘယ်လို ပို့ရမယ်ဆိုတာ နားမလည်ခဲ့ပါရှင်
အခုတော့ ပြခန်း တစ်စခန်းရပ်ပြီမို့ . . .
ဒါပေမယ့် သီးသန့်ပိုစ့်အနေနဲ့ ကဗျာတွေ ရေးတင်ပါဦးနော်
ကျနော်လိုလူက ကဗျာဆို ချစ်တတ်လို့ . . .